» छोरा जन्माउन पटक पटक गर्भपतन
८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०३:५१
बझाङकी सुस्मिता लामा उमेरले भर्खर २५ वर्ष पुगिन् तर, उनको चालढाल उमेर ढल्केकी महिलाको जस्तो देखिन्छ । नहुन् पनि किन ? उनले गत एक वर्षको अवधिमै दुईपटक गर्भपतन गरिसकेकी छिन् । दुवैपटक छोरीको गर्भ बसेकोले उनले गर्भपतन गरेकी थिइन् । पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्मिसकेकोले उनलाई अब छोरा नै जन्माउनुपर्ने परिवारिक दबाब छ । हाल उनी फेरी गर्भवती भएकी छन् । गर्भमा छोरी भए, फेरी पनि आफू गर्भपतन गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
छोराको आसमा पटक पटक असुरक्षित गर्भपतन गर्नेमा मीना बोहरा (२९) पनि हुन् । गर्भपतन गरेको श्रीमानलाई थाहा भएपनि उनी आफ्नो शारीरिक कमजोरी बाहिर देखाउन सक्दिनन् । भन्छिन्, ‘समाजका अघि केही नभएको जस्तो बहाना गर्नुपर्छ । घाँस, दाउरा गर्न जाँदा त्यहीँ आराम गर्छु, घरमा समेत अरुले थाहा पाए नराम्रो ठान्छन् ।’
आफूखुसी गर्भपतन गराउँदा नानी विष्ट (२५) ले गत महिना झण्डै ज्यान नै गुमाउनु परेको थियो । उनका पनि छोरा छैनन् । गर्भपतनपछि अत्याधिक रक्तस्राव हुँदा उनको ज्यान जोखिममा परेको थियो । उनलाई जिल्ला अस्पताल सीमखेतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा.विष्णु खतिवडा र डा.आनन्द सिंहले आफ्नै रगत दिएर बचाएको अस्पतालका तत्कालिन मेडिकल अधिकृत डा.मिलन सिलवाल बताउँछन् ।
डा.सिलवालका अनुसार सामान्यतया रगतको मात्रा १२ ग्राम प्रतिशत हुनपर्नेमा त्यतिखेर विष्टको शरीरमा रगतको मात्रा ३.२ ग्राम प्रतिशत मात्र रहेको थियो । ‘त्यस्तो अवस्थामा रगत उपलब्ध नभएको भए उनको ज्यानै जान सक्थ्यो’, डा. सिलवाल भन्छन् ।
जोखिमपूर्ण गर्भपतनले जयपृथ्वी नगरपालिकाकी रामकला नेपाली (२९) भने बाँच्न सकिनन् । जिल्ला अस्पतालका इन्डोर इन्चार्ज लक्ष्मी शाहीका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गरेको केही महिनामै असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराउँदा उनको अत्याधिक रक्तश्राव भएको थियो । यहि कारणले अस्पताल पुग्न नपाई उनको ज्यान गएको इन्चार्ज शाही बताउँछन् । धेरैपटक गर्भपतन गराउँदा अस्पतालले उनलाई ध्यान दिन थालेकोले रामकलाले आफूखुसी औषधी सेवन गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
जति नै सुरक्षित भएपनि पटक पटक गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गर्छ । गर्भपतनका कारण पाठेघरमा विभिन्न खाले संक्रमण हुने, तल्लोपेट र कम्मर दुख्ने, पाठेघरमा क्यान्सर हुने, रगतको कमी भएर एनिमिया रोग लाग्ने, पाठेघर खस्ने, बाँझोपन लगायतका समस्या हुने जिल्ला अस्पताल बझाङकी स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मी शाही बताउँछिन् । यसमाथि पटक पटक बच्चा फ्याल्नुपर्दा महिलामा आत्मग्लानी तथा मानसिक तनाव पनि उत्तिकै हुने गर्छ ।
यसरी गर्भपतन गराउँदा महिलाको शारीरीक अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ भने कामको बोझ पनि उत्तिकै देखिन्छ । पोषिलो खाना खान नपाउने र सुत्केरीले जस्तो आराम नपाउने हुँदा महिलालाई सास्तीमाथि सास्ती भइरहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
गर्भपतन गराउँदा त्यतिबेला मात्र कमजोरी भएको महसुश गर्ने नानी विष्ट अहिलेसम्म आफू स्वस्थ हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘धेरैपटक गर्भपतन गराएका कारण अहिले २५ वर्षे जवानीमै पहिले जस्तो काम गर्न नसक्ने भएकी छु । भारी बोक्दा र घरको सामान्य काम गर्दा पनि रिँगटा लाग्ने, कम्मर दुख्ने, तल्लो पेट दुख्ने हुन्छ । यो त अकालमा ज्यान गुमाउनु सरह रहेछ’, विष्ट भन्छिन् ।
गर्भको लिंग पहिचान गर्नु अवैधानिक भएकोले जिल्लाका अधिकांश महिला भारतको उत्तर प्रदेशको पाेलिया भन्ने ठाँउका स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने गर्छन् । बझाङबाट दुई दिनमा पाेलिया पुग्न पुग्न सकिन्छ भने धनगढीबाट चार दिन लाग्ने गरेको छ । अहिले बझाङ जिल्लाबाट मात्रै त्यहाँ गएर गर्भ जाँच गराउनेहरु दैनिक १०/१२ जना हुने गरेको महिलाहरु नै बताउँछन् ।
पाेलियामा रहेका विभिन्न मेडिकल तथा अस्पतालमा जानुको मुख्य उदेश्य नै गर्भको लिंग पहिचान गर्नु देखिन्छ । यस्तो गर्नेमा अनपढदेखि शिक्षित महिलाहरु समेत छन् । तर, त्यहाँ गर्भपतन गराउन महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने र नेपालमा गर्भपतनका औषधीहरु सहजै उपलब्ध हुने भएकोले अधिकांशले नेपालमै आएर गर्भपतन गर्ने गर्छन् । यसले गर्भको भ्रुण पहिचान भएपछि गर्भपतन भइरहेको र महिलाको स्वास्थ्य समेत अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनाएको देखिन्छ ।
पाेलिया जानेमध्येकी एक आमा हुन् दिलु भण्डारी (२६) । उनको साथमा ४ वर्षिया छोरी छिन् । छोरी जन्मेदेखि उनलाई छोरा जन्माउने दबाब आएकोले उनले अहिलेसम्म तीनपटक गर्भपतन गरिसकिन् । हुर्किसकेकाे भ्रुण फाल्न उनले अाफूखुसी अाैषधी समेत खाएकी थिइन् ( हे‍. वक्स) ।
‘तीन महिना भन्दा बढी भइसके पछि मात्र छोरा छ की छोरी भनेर राम्रो सँग जान्दो रहेछ । म सँगै तीन, चार जना साथीहरु गएका थिए तर, एकजनाको मात्र छोरा रहेछ’, आफ्नो अनुभव सुनाउँदै दिलु भन्छिन् ।
तीनवटै गर्भको लिंग पहिचान उनले पाेलिया गएर गरेकी थिइन् । ‘छोरा नभए अपुतो भन्ने प्रचलन छ, अनि बुढेसकालको सहारा पनि छोरा हो भन्छन् । त्यही भएर पनी छोरी भन्दा छोरा नै आवश्यक छ’, उनी भन्छिन् ।
जिल्ला अस्पतालमा समेत गर्भमा रहेको बच्चा छोरा हो कि छोरी भन्दिनुपर्यो भन्दै महिनामा १०, १५ जना महिला आउने गरेको इन्र्चाज शाहीको अनुभव छ । यसरी छोरा पाउन खोजेका महिलाले पटक पटक गर्भपतन गर्दा पछि उनीहरु पाठेघरको समस्या लिएर आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
छोरी जति नै जन्माएपनि छोरा नजन्मेसम्म सन्तान जन्माइरहने यहाँको चलन नै देखिन्छ । यस्तोमा खासगरी छोरा नभएसम्म महिलाले गर्भपतन गरेको भेटिन्छ । कोही सासू ससुरा र समाजको डरले गर्भपतन गराउन बाध्य छन् भने कोही श्रीमानको खुसीका लागी । कोही भने देखासिकी र आफ्नो चाहना पूरा गर्नका लागि वर्षैपिच्छे गर्भपतन गरिरहेका देखिन्छन् । छोरा नहुनुमा सन्तान जन्माउने आमालाई नै दोषी देख्ने अशिक्षित समाजका कारण पनि यस्तो गर्भपतनले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
कतिले भने छोरा नजन्मेसम्म सन्तान जन्माउँदा परिवारमा छोरीको संख्या अत्याधिक देखिन्छ । स्थानीय आशा बोहरा (४५) छोरा पाउने आशै आशमा ६ वटा छोरी जन्मिएको र अन्तिम पटक छोरा भएपछि मात्र सन्तान जन्माउन छाडेको सुनाउँछिन् ।
हरीना नेपाली (४३) को पनी ९ वटा छोरी जन्मिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म छोरा नजन्मिएकोले उनले सन्तान जन्माउन छाडेकी छैनन् । अहिले पनि हरिना दुई जीउकी छन् । ‘भएको सम्पत्ति कसलाई दिने ? छोरा जन्मिए काजकिरीया गर्ने थियो, अपुतो रहनुपर्ने थिएन । समाजले कुरा काट्न पनि पाउने थिएन’, आँखामा आँशु टिलपिल पार्दै हरिना भन्छिन्, ‘मलाई त हजुर, गाँउकाले अलच्छिनी पनि भन्न थालीसके, श्रीमानले पनि कुट्न छोड्ने होइन । यो पटक त छोरा होला भन्ने आशा छ ।’
( पीडित महिलाहरुकाे नाम परिवर्तन गरिएकाे छ।)
( विष्ट, बझाङका पत्रकार हुन्।), साभार : महिला खबर ।